अर्थ-वाणिज्य – Page 122 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०१:५६ English
पाल्पाका आइतवीर लामा मौरीको घार बेचेर वर्षमा चारलाख आम्दानी गर्दै २ बैशाख २०६९, शनिबार ०८:५६
जाजरकोटमा चामल राख्न गोदामको अभाव ३० चैत्र २०६८, बिहीबार १०:१२
जाजरकोट, ३० चैत । नेपाल खाद्य संस्थानको शाखा कार्यलय जाजरकोटमा खाद्यान्न राख्न गोदामको अभाव भएको छ । खलंगा गाविस वडा नं २ थाप्लेमा रहेको एक कोठे भवनमा खाद्यान्न नअटाएकाले गोदामको अभाव भएको हो । संस्थानको गोदाममा १ हजार क्विन्टल मात्र चामल अटाउन सक्ने क्षमता भएको नेपाल खाद्य..
भोटेकोशी तार्दै गर्दा अवैध चिनियाँ सामान बरामद ३० चैत्र २०६८, बिहीबार १०:१२
काभ्रे, ३० चैत । सिमा सुरक्षा प्रहरीबल कोदारीले चीनसँग नेपालको प्रमूख व्यापारीक नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीबाट गएराति विभिन्न अवैध चिनियाँ सामान बरामद गरेको छ । राति करिब साढे ८ बजेको समयमा तुइन बनाएर भोटेकोशी नदी तार्दै गर्दा गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले पर्वातोरोहण गर्दा..
लगानी सुरक्षाकालागी नियमन निकायका विरुद्ध लगानीकर्ता द्धारा आन्दोलनको घोषणा २९ चैत्र २०६८, बुधबार १८:३५
काठमाडौं २९ चैत्र । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र जनरल इन्भेष्टर्स एसोसिएसनले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय लगायतका अन्य नियमनकारी निकायहरुले आपूmहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आगामी बैशाख ३ गतेदेखि चरणबद्ध संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विगत दुई..
लगातारको पानीले लाखौंको तरकारी नष्ट २९ चैत्र २०६८, बुधबार १८:११
काठमाडौ, २९ चैत । पर्वतमा केही दिन यता परेको पानिका कारण केही गाविसहरुमा लाखौं रुपैयाँको तरकारी बाली र तरकारी बीउ नष्ट गरेको छ । तीनदिन देखि परेको असिना र पानीले पाङगराङग गाविसमा लाखौ रकम बराबरको काँक्रो, गोलभेंडाको बिउ नष्ट भएको हो । जिल्लाको बीउ उत्पादनको प्रमुख पकेट क्षेत्रको..
मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा फेरि स्थानीयहरुबीच कुटाकुट २८ चैत्र २०६८, मंगलवार ०९:१८
सिन्धुपाल्चोक, २८ चैत । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बन्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुबीच फेरि झडप भएको छ । “आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ” भन्ने स्थानीयबासिन्दा र आयोजनाको विपक्षमा रहेका स्थानीयबीच झडप हुँदा झन्डै १२ जना घाइते भएका छन् ।..
काभ्रेका किसानहरुलाई ३३ प्रतिशत अनुदानमा १२ हजार किलोग्राम मकैको बीउ २८ चैत्र २०६८, मंगलवार ०९:१७
काभ्रे, २८ चैत । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेले जिल्लाका किसानहरुलाई ३३ प्रतिशन अनुदानमा मकैको बीउ वितरण सुरु गरेको छ । समयमै पानी परेकाले किसानहरुले गएको वर्षको भन्दा छिटो खेती लगाउन थालेपछि कार्यालयले बीउ वितरण कार्यलाई अघि बढाएको हो । काभ्रेका किसानहरु पानी परे लगत्तै मकै..
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सुरु २३ चैत्र २०६८, बिहीबार १०:२५
काठमाडौ, २३ चैत । राजधानी काठमाडौंमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमेला सुरु भएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताका लागि साझा फोरम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमेला आयोजना गरिएको आयोजक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । मेलाको..
सात महिनामा ५२ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो २१ चैत्र २०६८, मंगलवार १८:०७
सिन्धुली, २१ चैत । सिन्धुलीमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ५२ करोड रेमिट्यान्स भित्रीएको रेमिटसम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्थाले जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्त सम्ममा सो रेमिट्यान्स रकम भित्रिएको मातृभूमी विकास बैँकले जनाएको छ । जिल्लामा उचित रोजिगारि नपाएर..
वेमौसमी काक्रा खेतीबाट ७० हजार बढी आम्दानी १९ चैत्र २०६८, आईतवार ०९:४९
नेपालगन्ज, १९ चैत । बर्दियाका किसानहरु यतिबेला काक्रा खेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । मोतिपुर गाविस ७ सतरियाका किसानहरुले बेमौसमी काक्रा खेती गरेर अहिले सोचेभन्दा राम्रो आम्दानी गर्न थालेका हुन । स्थानिय किसान उल्टबहादुर चौधरीले हाल ५ कठ्ठामा लगाएको काक्राबाट करिब ७०..
सर्लाहीमा विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियानबाट १४ लाख रुपैया राजश्व संकलन १८ चैत्र २०६८, शनिबार १८:१२
सर्लाही, १८ चैत । सर्लाहीमा विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियानबाट १४ लाख रुपैया राजश्व संकलन भएको छ । गत साउन देखि फागुन सम्ममा अभियानबाट १४ लाख रुपैया राजश्व संकलन भएको विद्युत प्राधिकरण मलङ्गवा शाखाका प्रमुख दिपेन्द्रराज द्विवेदीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र..
सर्लाहीमा गत वर्षको तुलनामा आलु उत्पादनमा २० प्रतिशतले वृद्धि १८ चैत्र २०६८, शनिबार १८:११
सर्लाही, १८ चैत । सर्लाहीमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आलु उत्पादनमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भई यस वर्ष ६ हजार १ सय ५० मेट्रीकटन आलु उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षहरुमा जस्तो यस वर्ष डडूवा रोग तथा शितलहरले..
सहकारीका कोषाध्यक्ष र लेखापाल पक्राउ १६ चैत्र २०६८, बिहीबार १३:५३
रौतहट, १६ चैत । सामुदायिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चन्द्रनिगाहपुरले बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नगरेपछि संस्थाका कोषाध्यक्ष तथा लेखापाललाई पक्राउ गरी प्रहरीमा बुझाइएको छ । संस्थाका कोषाध्यक्ष उदयनारायण चौधरी र लेखापाल जितेन्द्र चौधरीलाई बचतकर्ताहरुले पक्राउ गरी ईलाका..
मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणकोलागी कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता १४ चैत्र २०६८, मंगलवार १४:४१
काठमाडौ, १४ चैत । करिब ४७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाका लागि कोरियन कम्पनी कोरिया वाटर रिसोर्सेस कर्पोरेसन (के–वाटर) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहमति भएको छ । राजधानीमा भएको कार्यक्रममा के–वाटरका उपाध्यक्ष वायोयुङ हुनर युन र प्राधिकरणका..
दैलेखमा चार वर्षदेखि बन्द सिनेमाहल अझै सन्चालनमा आएन १४ चैत्र २०६८, मंगलवार ०९:३४
दैलेख, १४ चैत । पछिल्ला दिनमा देशमा चलचित्रको व्यापारमा बृद्धि भएपनि दैलेखमा भने सन्चालनमा आएको एकमात्र सिनेमाहल चार वर्षदेखि बन्द रहेको छ । सुरुमा दर्शको भिड थाम्न हम्मेहम्मे हुने हलमा पछिभने दर्शकनै देखिन छोडेपछि हल बन्द भएको हो । सन्चालन भएको दुईवर्षसम्म राम्म्रै आम्दानी..
जहाज खरिदमा भएको अवरोध हटाउन पधानमन्त्रीको निर्देशन १३ चैत्र २०६८, सोमबार १५:५५
काठमाण्डौ, १३ चैत्र । नेपाल वायुसेवा निगमको लागि हवाई जहाज खरिद गर्ने सम्वन्धि सरोकारवाला पक्षहरु विच सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आनौपचारिक छलफल भएको छ । छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्राईले छिटो भन्दा छिटो जहाज खरिद गर्न खरिदको लागि भइरहेको अलमललाई हटाई..